"အကူအညီ:Revertapage" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"အကူအညီ:Revertapage" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
အကူအညီ:Revertapage (ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန်)
၀၄:၅၇၊ ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ
၂၇၈၂ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၉ နှစ်
၀၆:၅၈၊ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး ("စာမျက်နှာ တစ်ခု..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
၀၄:၅၇၊ ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန်)
*"'''ရာဇဝင်ကြည့်ရန်'''" ကို နှိပ်ပါ၊
*ရွေးချယ်ထားသော မူများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် (ဥပမာ)- '''(၂၂:၁၉၊ ၂ ဇူ​လိုင်​ ၂၀၁၁ MerlIwBot)''' ကဲ့သို့ သင်တွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
*ထို့နောက် ယခင်မူသို့ ပြောင်းလိုသည့်အကြောင်းအရာရှိ အချိန်နှင့် နာရီပေါ်တွင် နှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် "'''လက်ရှိ'''" သို့မဟုတ် "'''ယခုမတိုင်မီ'''" ကို နှိပ်မိပါ။နှိပ်မိပါကအလုပ်လုပ်မည် ထို့ပြင်မဟုတ်ချေ။ ယင်းဘေးရှိ ခလုပ်ပေါက်လေးနှစ်ခုသည် '''လက်ရှိ၊ ယခုမတိုင်မှယခုမတိုင်မှီ''' ကို ကိုယ်စားပြုထားသည်။ ယင်း အပြာရောင်ခလုပ်ခလေးများနှိပ်နိုင်ပါသည်။
*ထို့နောက် သင်အမှန်တကယ်ပြောင်းလိုသည့် အရာဖြစ်သည်ကို သေချာအောင်လုပ်ပါ၊သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက် "'''ရွေးချယ်ထားသော မူများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်'''" ဆိုသည့် ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် "'''ရွေးချယ်ထားသော မူများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်'''" ဆိုသည့် ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
*ထို့နောက်သင့်အား ပြင်ဆင်ထားသည်များကို နှိုင်းယှဉ်၍ ပြပါလိပ်မည်။ ထို့နောက် "ပြင်ရန်" ဆိုသည့် မီနူးခလုပ်ကိုနှိပ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း
'''"Warning: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost."'''
ထို့နောက်*၎င်းကို သတိပေးချက်အား ထား၍ "'''ဤစာမျက်နှာကို သိမ်းရန်'''"ဆိုသည့် ဆောင်းပါးအောက်ရှိ ခလုပ်ကို နှိပ်၍ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် '''နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း''' ခြင်းသည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်သရမ်းဖျက်ဆီးမှုကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ရောက်၏ ပြုပြင်ခြင်းကို သင်ကမကြိုက်နှစ်သက်ပါ ဟူသည့် အတွေးတစ်ခုတည်းဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ကောင်းသောအတွေးတစ်ခုမဟုတ်ချေ။ အထူးသဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ယင်းစာမျက်နှာ၏ အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ခုကို အစားထိုး၍ ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားနေချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ချိန်တွင် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်းအစား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သည် ပြောရန် စာမျက်နှာကိုအသုံးပြု၍ ဆောင်းပါးပေါ်ရှိ အချက်အလက်ကို ပြောဆိုခြင်းဖြင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူရန် ကြိုးစားခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
==နောက်ပြန် ပြင်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းမူဝါဒ==
မီဒီယာဝီကီ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းက ဆောင်းပါးရေးသားသူတစ်ဦးကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ပြောင်းလဲမှုများလုံးကို နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းကိုအသုံးချရန်အတွက်ကား ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ယခုမတိုင်မီကို နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် မူအသစ်ပေါ်ရှိ '''နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်''' ဆိုသည်ကိုနှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှုများပါဝင်သည့်မလိုလားအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများကို ဖယ်ရှားကာ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှုများပြန်လည် ပါဝင်သည့်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖန်တီးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ထိုနေရာတွင် တည်းဖြတ်မှု အကျဉ်းချုပ်ကို ပြုလုပ်ထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းအကျဉ်းချုပ်သည် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စာမျက်နှာအား သိမ်းဆည်းမှုမတိုင်မှီ ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သေးသည်။
==နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း တိုက်ပွဲများ==
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/100597" မှ ရယူရန်